သွေးမပါတဲ့ ဆေးဝါး | သွေးအစား တခြားရွေးချယ်စရာများ | JW.ORG ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ပကတိ​သွေး ဒါမှမဟုတ် အဓိက​သွေး​အစိတ်အပိုင်း​တွေကို မ​သုံး​ဘဲ အောင်မြင်စွာ​လုပ်ဆောင်​နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှုပ်ထွေး​တဲ့ ဆေးဝါး​ကုသမှု၊ ခွဲစိတ်​ကုသမှု​တွေ​အကြောင်း ဆေးပညာ​နဲ့​ဆိုင်တဲ့ စာပေတွေမှာ ပါရှိတယ်။ သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသမှု​တွေ​ထဲမှာ အဓိက​အသုံးပြုတဲ့​နည်း​တွေ​ကတော့ သွေး​ထွက်​နည်း​အောင်​လုပ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့​သွေး​ကို သိုလှောင်​သိမ်းဆည်း​ထားပြီး ပြန်​အသုံးပြုခြင်း၊ သွေး​ဆဲလ် များ​လာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သွေးအားနည်း​တာ​ကို ခံနိုင်ရည်​ရှိဖို့ ကိုယ်ခံအား​ကောင်း​လာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း​တို့​ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့​သွေး​ကို သိုလှောင်​သိမ်းဆည်း​ထားပြီး ပြန်​အသုံးပြုခြင်းနဲ့ သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသခြင်း​အကြောင်း​တွေကို အလေးပေး​ဖော်ပြ​ထားတဲ့ ဆေး​ဂျာနယ်​တွေ​ထဲ​က ပညာရှင်​တွေ သုံးသပ်​ဖော်ပြ​ထားတဲ့ ကိုးကားချက်​တွေကို ဒီ​အပိုင်းမှာ ဖော်ပြ​ပေးထား​ပါတယ်။
သွေး​ထွက်​လွန်​ခြင်းနဲ့ သွေးအားနည်း​ရောဂါ​ကို သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသ​ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း​တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ​ကလေးနဲ့ ကလေး​လူနာ​တွေကို သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသ​ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း​တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါတွေ​နဲ့ တခြားသူရဲ့ သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသနည်း​တွေ​အတွက် ဆေးပညာ​ဆိုင်ရာ​အချက်အလက်​တွေ ဖြစ်တယ်။
ယေဟောဝါ​သက်သေတွေကို ကုသ​ပေးတဲ့​အခါ ဆရာဝန်တွေ သုံးသပ်​သင့်တဲ့ ဆေးပညာ​ဆိုင်ရာ​ကျင့်ဝတ်၊ တရားရေး​နဲ့ လူမှုရေး​အချက်အလက်​တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Implementation ofacomprehensive patient blood management program for hospitalized patients atalarge united states medical center. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Mayo Clin Proc. 2021;96(12):2980-90.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 34736775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34736775/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Oral is as effective as intravenous tranexamic acid at reducing blood loss in thoracolumbar spinal fusions:aprospective randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Spine 2022;47(2):91-8.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 34224510
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224510/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery:aretrospective cohort study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 33483268
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial:arandomized clinical trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 33432157
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Perioperative management including dual cell salvage inaJehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 34824851
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 34353645
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 32650703
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 33834189
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 34217505
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants:asystematic review and network meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 33683307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)